Ụbọchị My Pet » Iri Nzọụkwụ na mba a na-akpali akpali Singles Party
emelitere ikpeazụ: Feb. 28 2020 | 4 min agụ
The #1 mkpesa nke kpọrọ n'ebe nile bụ ebe na-aga izute onye ọhụrụ. Ma ha na- 25 ma ọ bụ 65, kpọrọ bụ mgbe niile na-achọgharị ebe izute ndị na-abụghị nwoke gabiga mmanya idaha. Soro nzọụkwụ ndị a n'ihi na-atụba a na-eme n'ụlọ ọzọ na iduba na-akpali akpali kpọrọ idaha.
1. The Ụbọchị: Etiti izu nnọkọ dị ukwuu prep maka izu ụka fun. Enye ndị ọbịa a ohere ime enyi ọhụrụ maka ọdịnihu na-eme. Izu ụka ọzọ bụ 'ụbọchị n'abalị’ nke kpọrọ izu. -Adị njikere izute elu-atụ anya ka romance. Agụsi atụmanya n'etiti sexes ga-mmanya na inwe mmekọahụ onwu gị ọzọ.
2. The Òkù: Email ike de rigueur taa ọzọ ìgwè mmadụ ma ọ dịghị ihe gbagwojuru Ukwuu obi na-adị nke onye na-anọghị n'ịntanetị omenala òkù maka iwuli mkpali. Dabere na size nke otu i nwere ike iji a mix nke ma. Mepụta ebipụta na-akpọ na-akpali akpali ọcha nke abalị na-abịa. Ka ihe atụ a luscious Ɛpo Day, ebe a gold akwụkwọ okpueze na ọzọ òkù na-acha uhie uhie edemede n'ime red foil obi igbe. Tie na wired rịbọn na adreesị ka onye 'Eze’ ma ọ bụ 'Queen Obi.’
Gaa glam na gilded igbe si obodo anyịnya ụlọ ahịa jupụtara ego sukruu, dara shredded akwụkwọ, na otu nkọwa. Òkù ọbịa na-abata na a kalama ha mmasị mkpuchi ekpuchi na 'uncork na fun.’
Ma ọ bụ n'ihi a Cinco de Mayo ọzọ ịzụta Obere sombreros na
itinye a mkpado nke na-agụ otu akụkụ 'Unu na-a n'okpuru gị okpu.’ On n'akụkụ nke ọzọ nke mkpado, ebipụta ọzọ nkọwa. Ọ bụrụ na ị nwere ike n'aka-anapụta a ole na ole na-agba, na-eji zuru size toppers na òkù ọbịa na-eyi ha ka ha na oge.
Jiri ihe online ọrụ dị ka Evite.com-agbasa ozi virally maka nnukwu nnọkọ.
Echefukwala na-eso na a ekwentị oku iji nweta ezi ihe ọbịa ọnụ na iji mee akpatre minit nkọwa.
3. The List: Ònye ya agbarapụ òkù. Dabere na nke nke ohere na ahụmahụ na ị chọrọ ike. Òkù nọmba ohere esetịpụ gbakwunyere 20% iji nweta obi ụtọ anwụrụ. Ọ bụrụ na ị mabanye onye anya gị na-ezukọ na i nwere ikwu ihe. Otu ịnụ ọkụ n'obi 'Ndewo’ kacha mma akara mgbe mepụtakwara. Plan inwe ọbịa guzo vesos ọdụ, ọ na-eme ịgwakọta ọnụ na-akpali mfe. Unu nwere ihe putara ighe enịm aba ọzọ na-akpachi anya mkparịta ụka. Ị gaghị achọ ọbịa-aga gị ime maka ihe na-akpachi anya chat.
Nọgidenụ na-ọnụ ọgụgụ ndị na-abụghị mmekọahụ dị ka ọbụna dị ka o kwere ma ghara imesi si ukwuu. Cheta inyom agbasaghị RSVP n'oge. Men na-adịghị eme ka atụmatụ ruo ikpeazụ nkeji otú na-atụ anya a testosterone anya ụbọchị nke ọzọ. Gbaa enyi na-agba ha ọzọ otu enyi edejupụta nọmba.
4. The Scene: Mepụta a VA-VA-VA-voom Valentines n'anya fest na omiiko iche nke uhie, -acha odo odo, ma ọ bụ pink. Gbanwee otú omenala obi na okooko osisi. Wet nnukwu iko vases na nku boas na nku ticklers. Gbasaanụ e biri ebi teasers dị ka: 'Otighiti m', 'Bịanụ Play Uwe Up', 'Ata Ọ na good', '-Achụ nwoke Dị ka Ị Pụtara Ọ’ na 'Mmd Na Me’ nso inyoghị inyoghị ọkụ kandụl votives gburugburu ụlọ.
5. I.D. chọrọ: Ime ka ọ dịkwuoro ndị izute – ike ILE aha Ndị Ọrụ Nhazi Obodo si oghere buttons e biri ebi na catchy nkebi ahịrịokwu ndị dị ka 'ga-____ maka nri’ , 'N'ihi na Otu Night Naanị m na-Aga ______’ , 'Izute m, M _______’ 'Ọ ga-flirt maka _____’ '_____ Na-achọ otu ihe ahụ.’ Nwere ọbịa jupụta na blanks na ide ya ma ọ bụ aha ya na-adịgide adịgide nrịbama. Ma ọ bụ mepụta Ukwuu ngafe lanyards na otu isiokwu na ohere maka ha Ama. Ọ ọrụ abụọ dị ka oké ọzọ ncheta.
Jide n'aka na ịme ọbịa na onye ọ bụla ọzọ dị ka anya dị ha na-abata n nnukwu egwu kpọrọ 'M ga-amaghị onye ọ bụla.’
6. The Fun lekọtara: Icebreakers bụ isi. Singles mgbe o yiri ka a na ọnwụ n'ihi na okwu mgbe na-agbalị itinye ndị ọzọ kpọrọ. Nye ha ihe ka ha na-ekwu banyere. Ma isiokwu bụ 'Fim Games’ na ị na icho mma mgbidi na twister Ibé akwụkwọ na nanị mbadamba. Na icebreaker achọ ọbịa 'ime ka ha aga’ site obon egwuregwu tokens si ọzọ partygoers.
Ma ọ bụ 'kpọrọ bingo’ ebe onye ọ bụla na-enweta a egwuregwu kaadị na-akpali eziokwu banyere ndị ọzọ ọbịa. The ihe nke egwuregwu bụ ịchọta onye dabara nkọwa na osisi. -Eto eto na-ekpuchi ha osisi na signatures.
Ma ọ bụ na-enye ndị ọzọ 'omenala’ akụ na bolts egwuregwu a ighikota. Bulie keagwaraogwa kposara na bolts na mpaghara gị ngwaike ụlọ ahịa. Nye ndị inyom na-kposara na ndị ikom na-bolts na-ekiri ndị ogbaaghara ma onwu mmụba dị ka ndị mmadụ n'otu n'otu na-agbalị ịchọta ha egwuregwu. Ndị mmụọ nke mpi mgbe adọta ndị mmadụ na.
7. The Drink: Mepụta a mbinye aka ọṅụṅụ. Ọ bụ oké mkparịta ụka Starter. Ewe ibu na-efu nke a zuru mmanya anya usu. Ị nwere ike zuo ike na concoction na tupu ke pitchers. Get a yi nchịkọta ego ice bọket na ka ọbịa tinye ice na-eje ozi ha. Jide n'aka na ibipụta elu ọṅụṅụ uzommeputa kaadị maka ndị chọrọ relive mgbede n'ụlọ. Na mgbe ọzọ uzu bụ n'aka banyere gị bartending mgbukepụ.
8. The Food: Mee ka gị na nke bụ ihe ọzọ na ụzọ dị mfe iji na-nnabata na kasị fun nri echiche. Ma ọbịa na-customizing ha onwe ha shish kabobs, mkpịsị aka nri eyiri, ma ọ bụ ice ude sundaes, ọ pụtara obere ọrụ n'ihi na ị na ndị ọzọ na mmekọrịta ha ihe dị ka ha tụnyere ndetu na ha kere.
Putara ighe enịm Obere-ọtịta ofụri ụlọ na-ukwuu n'ihi na kpọrọ ịgwakọta ọnụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ha na-agụụ na-agụ ha, ha na-adịghị-agbaji a oké njikọ ma ọ bụrụ na a tọrọ ụtọ achịcha bụ mgbe kwa n'ebe dị anya. Ọzọkwa ma ọ bụrụ na ha na-enwe mmetụta na ọ dị mkpa iji gbapụ a mkparịta ụka, ha na-eme a na-agba ọsọ maka eji megharịa ọnụ table gafee ụlọ nke na ha adịghị sampled.
9. The Music: -Akpọ ụda management. Mgbapụta elu olu nke mbụ mbata. The music ga-ejupụta efu ohere na-n'oge ọbịa si na-eche na ndị ọzọ na-adịghị malitere ma. Ka ọnụ ọgụgụ dịkwuo jide n'aka na ị na-atụgharị olu ala. Ha ekwesịghị ịdị mkpa ka mpi ndị music mgbe na-eme oké echiche.
Gbanwee otú na ngwa ngwa jams na ihu ọma nke elu-tempo gafere. Ọbụna ma ọ bụrụ na ha na-agaghị na-ete egwú a obere chịrị ha hips na-eme ka onye ọ bụla nke si n'egbugbere ọnụ anya ọzọ mara mma na ijekwuru.
10. N'ikpeazụ: Jide n'aka na ị nwetara oghere akwụkwọ na itienna putara ighe enịm ofụri ohere. E nweghị ihe ọ bụ njọ karịa akpatre na-e na-enweghị ihe kwesịrị ekwesị ngwá ọrụ na mechie ndibiat. Gị ọbịa ga-ndopuyo ekele unu maka ịbụ otú echiche.
Daashi: The Mgbe Party Scene: -Adị njikere ubi na ike-gị-na--m-ya ma ọ bụ-ya-ọnụ ọgụgụ olu Gburu. Gị ọbịa ga doro anya na-ajụ gị na ọhụrụ gị ọrụ dị ka matchmaker. Ị nwere ike igwu post ụlọ ọrụ ma na-agafe ozi tinyere ma ghara ikpughe ọbịa’ ozi gbasara n'agbanyeghị otú ụfọdụ ị bụ ọzọ nwe ọnụ.